Maamulka Jubbaland “Waxaan Billownay Howlgal Ballaaran Oo Ka Dhan Ah Alshabaab” – Goobjoog News
Saraakiisha ammaanka Maamulka Jubbaland ayaa sheegay in Ciidamada Maamulkaas Degaano badan ay ka bilaabeen hawlgal ay ku sheegeen in uu ka dhan yahay Xarakada Al Shabaab.
Waxay sheegeen saraakiisha in ciidanka Jubbaland oo kaashanaya kuwa AMISOM inay ku howlan yihiin sidii loo qaban lahaa degaannada ka maqan gacantooda oo qaarkood ay imina ay gaareen.
Afhayeenka laamanaha Amniga Jubbaland Axmed Carab ayaa sheegay in ay jiraan sida uu yiri degaano go’doosan oo ay ku sugan yihiin Xarakadda Al Shabaab.
“Ciidamadu waxay billaabeen howlgal ballaaran oo looga saarayo Alshabaab degaannada ay kaga sugan yihiin Jubbooyinka, sidaad ka warqabtaan dhowaan ciidamada waxay gaareen degaanka Cabdalla Biroole oo duleedka Kismaayo ah kuwa kalena way tegayaan oo ay ku harsan yihiin nimankaas Alshabaabka ahi” ayuu yiri Axmed Carab.
Waxa uu sheegay Afhayeenka in Ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Kenya ay ka qayb qaadanayaan dadaaladan ammaanka ay ku sugayaan.
Maamulka Jubbaland ayaa dhowr jeer ku celceliyay inay gaari doonaan degaannada ka maqan gacantooda oo inta badan ku yaalla gobolka Jubbada Dhexe sida Bu’aale iyo Saakow oo Alshabaab ay ka talinayaan muddo sanado ah.
Wasiir Odowaa Oo Ka Hadlay Khilaaf Siyasaasadeedka Ka Jira Gobalka Bakool
Pyftiu llzrbh Buy viagra internet printable cialis coupon
Vesrrw umhyly Best price for cialis canadian online pharmacy
Ofssfi ykgtjl canadian online pharmacy Dojph
cialis online uk cialis in ireland cialis 10mg price...
performance anxiety viagra viagra after age 70 which is bett...
Will she presume can find hardly any dollars?The point could...
how much is viagra viagra without a doctor prescription cana...